हालसम्म विश्वमा १७.५१ करोड भन्दा बढी कोरोना संक्रमित, ३७.७६ लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाए – Sajha Pati
गएको बर्ष राहत वितरणमा खटिने १३९ जना कोविड प्रभावित स्वयमसेवकलाई वीमावापतको रकम प्रदान::बाढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरले ५० / ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने::सघन छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्छौ : मेयर शाक्य::बाढीजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि मेलम्ची नगरलाई काठमाडौँ महानगरद्वारा २ करोड रुपैयाँ सहयोग::कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष छुट/सहुलियत::विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिप फाइनलका लागि टीम इण्डियाको घोषणा::काठमाडौँ महानगर र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषविच सम्झौता, जैविक विविधता र सहरी हरियाली प्रवर्धनमा काम हुने::काठमाडौँ महानगर र नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानविच सम्झौता::नीतिगत अध्ययन विश्लेषणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ विश्वविद्यालयविच सम्झौता::असार ३ गते आ. व. ०७८/०७९ का लागि नीति प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ महानगर
हालसम्म विश्वमा १७.५१ करोड भन्दा बढी कोरोना संक्रमित, ३७.७६ लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाए
संसारमा कोरोनाका केसहरू फेरि बढ्न थालेका छन् । गत २४ घण्टामा विश्वव्यापी ४ लाख १५,५३६ व्यक्तिको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ पाईएका छन् भने यस अवधिमा १३,७५५ मानिसहरुले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् । सबै भन्दा धेरै जसो केसहरू अझै भारतमा देखा परेका छन् ।
अर्कातिर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्यहरू कोरोना खोप, अत्यावश्यक औषधि र उपकरणहरूबाट पेटेन्ट हटाउने विषयमा छलफल गर्न सहमत भएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार छलफल द्रुत ट्र्याक मोडमा चल्नेछ । विश्व व्यापार संगठनको एक महत्वपूर्ण बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
यस अवधिमा भारतले यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । ब्रिटेन अनलक भएको २३ दिन भइसकेको छ । अनलाक पछि फेरि कोरोनाका नयाँ घटनाहरु बढ्न थालेको छन् । १०३ दिन पछि बुधवार बेलाइतमा कोरोनाको रेकर्ड ७,५४० नयाँ घटना फेला परेका छन् । यसअघिको फेब्रअरी २६ मा ७,४०१ घटनाहरू भेटिएका थिए । यसका साथै, बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको डर तीव्र भएको छ । यद्यपि लकडाउन गर्ने विषयमा अझै शंका छ । २१ जुन सम्म लगातार संक्रमणको संख्या बढ्छ भने मात्र लकडाउन लागू हुनेछ ।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको संख्यामा कुनै कमी आएको देखिदैन । संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्यामा पनि खासै फरक परेको छैन । छिमेकि भारतमा केही राज्यहरुमा संक्रमणको संख्यामा कमी आएता पनि ढुक्क भएर लकडाउन खोल्ने संभावना भने कमै देखिएको छ । गत २४ घण्टामा विश्वव्यापी ४ लाख १५,५३६ व्यक्तिको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ पाईएका छन् भने यस अवधिमा १३,७५५ मानिसहरुले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
यस्तो स्थितिमा नेपालमा जेठ मसान्तसम्म लगाईएको लकडाउन अब चार दिन मात्र बाँकि छन् । त्यसपछि कस्तो अवस्था देखिन्छ त्यसै अनुसार लकडाउन विषय निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ तर अब नेपाली जनता लकडाउनको मार झेल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । नेपालमा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था भईरहेको छ ।
विश्वका देशहरुमा कोरोना अपडेट : अष्ट्रेलियामा बढ्दो संक्रमणका कारण, मेलबर्नमा लगाइएको लकडाँई शुक्रवार देखि खोलिनेछ ।
जापान ओलम्पिक अगाडि अमेरिकाले जापानको यात्राका लागि सहज गरेको छ । साथै अमेरिकाले नागरिकहरूलाई जापानको यात्रामा पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
सिनेमा, थिएटर, नाइटक्लबहरू चीनको ग्वाङ्गझाउमा संक्रमणका कारण बन्द भएका छन् ।
हालसम्म विश्वमा १७.५१ करोड भन्दा बढी मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेका छन् । यसमध्ये ३७.७६ लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १५.८६ करोड मानिसहरूले कोरोनालाई पराजित गरेका छन् । हाल १.२७ करोड मानिसहरुलाई उपचार भइरहेको छ । ती मध्ये १.२६ करोड मानिसमा कोरोनाको हल्का लक्षण रहेको छ र ८५,३३७ व्यक्तिको अवस्था गम्भीर छ ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा व्यवसायी भन्छन् — करको दायरा बढाउन हामी सहयोग गर्छौँ
काठमाडौँ । व्यवसायीहरुले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई करको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सन्दर्भमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नियमित बसेको बैठकका सहभागी व्यवसायीहरुले संघ महासंघमार्फत सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
महानगरको समृद्धिमा व्यवसायीहरुको साथलाई सँगै लिएर जाने हाम्रो सोच हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजस्वका दरमाभन्दा दायरामा हाम्रो दृष्टि छ । बैठककी संयोजक खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुको सहयोगबाट हामीले राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । राजस्व उठाउन सरकारले व्यवसायी खोज्दै जाने, व्यवसायी छल्दै जाने होइन । व्यवसायीका समस्या सरकारले समाधान गर्ने र व्यवसायीले कर तिर्ने हो । यसमा आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ ।’
बैठकमा मुख्यगरी महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तुगत र सेवागत व्यवसायको सञ्चालन, सञ्चालकको मनोविज्ञान, व्यवसाय दर्ता र नविकरण प्रक्रिया जस्ता बुँदामा छलफल गरी दायरा बढाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । काठमाडौँमा उत्पादन हुने बस्तुसँग सम्बन्धित र उत्पादन नहुने व्यापारसँग सम्बन्धित विषयलाई अलग राखेर हेरिनुपर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ । अटो वर्कसपजस्ता व्यवसायलाई सहरबाहिर धपाउने गरेको, व्यवसायिक क्षेत्र नतोक्दा बहालमा व्यवसायीमाथि धेरै भार रहेको, व्यवसायीको भनाइ छ । कर तिर्ने र नतिर्ने व्यवसायीकाविचको अन्तर महानगरले भनिदिनुपर्छ । यसले नियमित करदाताको हतोत्साह हुन दिँदैन । करको दायरामा नआएकालाई हामीसँगै मिलेर दायरामा ल्याऔँ, व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीकाअनुसार महानगरभित्रका व्यवसायलाई करीब ३ सय प्रकारमा बर्गीकरण गरेर व्यवसाय कर लगाउन प्रस्ताव तयार गरिएको छ । व्यवसाय गर्ने व्यवसायीका करीव ४० वटा संघ महासंघहरुसँग नियमित छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारिएको हो । उनीहरुले यस अघि भोगेका समस्या र असमानतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आगामी बर्षका नीति कार्यक्रम र योजना तयार पार्ने क्रममा छौँ । अधिकारीले छलफलका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, सरकारले कर निर्धारण गर्दा करदाताहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ ।
उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, वडाध्यक्ष नवराज पराजुली, कार्यपालिका सदस्य कान्ता गौत्तम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सन्दिप अग्रवाल र साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ प्रतिनिधि पदमकुमारी कार्की हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी हुनुहुन्छ ।
ढल्यो गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरूङको पक्षमा जम्मा २७, विपक्षमा ३० मत
कास्कि, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा भएको मतदानमा ५८ जना प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थिए भने ५७ जनाले मतदान गरेका थिए । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका गुरूङ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेने । यसका साथै मुख्यमन्त्री गुरूङको सरकार ढलेको हो ।
मुख्यमन्त्री गुरूङको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत आएको छ । मुख्यमन्त्री गुरूङलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले भोट दिएका थिएनन् । ३ जना सांसद रहेको जनमोर्चाका एक सांसद भने तटस्थ बसेका छन् ।
गएको बर्ष राहत वितरणमा खटिने १३९ जना कोविड प्रभावित स्वयमसेवकलाई वीमावापतको रकम प्रदान
खोप कार्यक्रमको अनुगमनमा मेयर शाक्य, आफू अनुकुल केन्द्रमा खोप लगाउन आग्रह
ढल्यो गण्डकीमा सरकार : मुख्यमन्त्री गुरूङको पक्षमा जम्मा २७, विपक्षमा ३० मत